Biladda Hormuudyada Xadgudubka 2014 | Explorations in History and Society
Biladda Hormuudyada Xadgudubka 2014
Moment Research Consultancy – Wednesday 31 December 2014 — Dunida Sanad walba waxaa laga bixiyaa abaalmarino kale duwan, kuwaasoo qiimeyntooda lagu salgooyo dhinaca Horumarka iyo Wanaaga, waxaadna maqashay Sanadkan abaalmarinta Nabadda, Maamul Wanaagsa, qorida Buug xigmad ku dheehantahay, uheelanaanta badbaadinta Buldhada iyo u Dagaalanka Xuquuqda Bini’aadamka.
Lakiin ma maqashay Dunidan iyada oo leysku abaalmarinayo xumo iyo dhibaatooyin sida Xadgudubyada baahsan ee Dalka iyo Dadka laga galay?
Moment History Society Online waxay baaritaan ku sameesay in ay idiin soo naqshadeeso hadaad Soomaali tihiin Shakhsiyaadkii idinka galay dambi Qaran, mid Ummadeed, mid Dhaqan iyo mid diimeedba ee Saannadka 2014. Sanadkaan 2014 waa markii Shanaad oo ey Moment History Society Online bixineyso Biladda Shaqsiyaadka Caadeystay in ay ku Xadgudbaan Sharafta Bulshada Soomaaliyeed.
1. Nicholas Kay
Nicholas Kay waxaa Soomaaliya loo soo diray 3 June 2013dii, markii laga raacdeeyay Dalka Suudaan. Markuu xafiiska Muqdisho yimid wuxuu la saaxiibay dhalinyarro reer Barri ah oo uu kamid yahay Nuuradiin Aadan Diiriye. Nuuradiiin oo mar isku soo taagay Madaxtinimadda Puntland.
Nicholas Kay looma soo magacaabin Soomaaliya in uu dhiso, nabadeeyo, colaadda ka aloolsan hakiyo, wuxuu u yimid in uu xukumo, kala qeybiyo, isku diro, gobol gobol u kala jaro, si loo abuuro cadowtinimo gaamoortay loona waayo midnimo Soomaaliyeed.
Marka Ninkii u heystay in uu yahay dhex-dhexaad ama Siyaasadda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ku wajahan ay tahay mid dhex-dhexaad ah waxey lamid athay Nin Okiyaalle madow habeen gashaday oo Cirbad raadinaya.
Kay wuxuu Soomaali ka doortay oo la saaxiibay oo si bareer ah ugu hiiliya oo ugu sadburiyaa, juffo soomaali kamid ah (Puntland) oo uu Cabdiweli Gaas maamule ka yahay.
Nicholas Kay wuxuu Aqoonsaday Maamullo aan caga ku taagneen iyo Madax aan jirin sida waxa loogu yeero Maamullada Jubba, Maamulka Saddexda Gobol, Axmed Madoobe iyo Shariif Sakiin oo uu Soomaali ka doorbiday.
Wuxuu xaqiray oo dhabarka u duway Soomaali inteedi kale, waa dagoodi, waa murille, waa garre, tuuf iyo quraanjow, waa beelweynta gugundhabe, waa beelweynta xaskul Hawiye, waa beelweynta direed, beelweynta ajooraan, beelweynta Hiraab, beelweynta karanle, beelweynyta xawaadle, beelweynta habargidir, beelweynta shiikhaal, beelweynta jareerweyn, beesha reer Xamar, beelwenyta reer Goleed iyo reer Maayo iyo inta tirada badan oo la heyb sooco ee meel walba ka dagta Soomaaliya. Dadkaas Soomaali waxey ka yihiin boqolkiiba todobaatan iyo shan, waxeyna dagaan Soomaaliya ka sakow, waxa lagu sheego Kililka Shanaad & NFD.
Kay, waa Nin waaya Arag ah, Siyaasi ah, Aqoon Akademik ah leh, xafiisyo muhim ah kasoo shaqeeyay sidaa daraadeed waa uu ogsoonyahay inay sidaas xaqiiqadu tahay, ee wuxuu inta badan u xaqiraya inyarna ugu sadburinaya waa in fooda la isgashado la iska horyimaado, waa in la helaa fidno joogta ah oo markaas asagu uu maamullo. Inta la isku sii jeedana badda Soomaaliya Kenya & Shirkadaha Batroolka loo gooyo oo loo Gacan galiyo. Waa in Badda Soomaaliya kaluunka ku jirana la xaalufiyo. Dalkana Sanad walba lagu yaboohsado oo habda meel Shir Lacag aruuris ah la yiraahdo Soomaaliya ayaa loogu qabanaya Shir dib u dhis & dib u heshiisiin.
Nicholas Kay Soomaalidu waxey u aragtaa in uu yahay Nin faashil ah. Yurub, Mareykan, Itoobiya & Kenya ayaguna waxey u arkaan inuu yahay Siyaasi gaamuuray oo cirka laga soo riday.
Hadaba maxaa Soomaali u dan ah? Ma inay Kay howsha uu hayo sacab ugu daraan baa, mise waa inay la xisaabtamaan oo ay iska qabtaan? Kala doorta!
Kenya 1991 wixii ka dambeyay ayay Siyaadad ahaan iyo Dhaqaale ahaanba kobocday, hormarkaas iyo kobacaas dhaqaale waxaa dhalay Burburkii Soomaaliya. Dadka Soomaaliyeed wax-soo-saarkii dhaqaale ay abuureen iyo Hantidii ay galiyeen ayaa Kenya oo Dal „faqri“ ahaa, dhaqaallahoodi kor u qaaday, waxeyna Burburkii Soomaaliya 5 Sano kadib Nairobi isku badashay Caasimada Labaad ee Afrika.
Kenya Burburka Soomaaliya waxey u adeegsatay Dad aan Soomaali aheyn laakiin Afka Soomaaliga ku hadla, oo caadifada qabiilku iyo Isir-naceybka Hawiye tababar lagu soo siiyay. Waxaa ka xasuusataan Maxamed Cabdi Afey (siduu sheegto: Daarood-Ogaadeen) Aamina Maxamed Jibriil (See sheegato: Daarood – Dhulbahante).
Dowladaha Norway, Fransiiska, Talyaaniga ayaa Kenya waxey siiyeen Qandaraas Raqiis ah, waxey u tababareen Ciidamo looma ooyaan ah oo Calooshood u shaqeysataal ah kadibnah waxey ku qabsadeen Koofurta Soomaaliya ayadoo loola jeedo in halkaas laga soo saaro Shidaalka Soomaaliya ee halkaas Ceegaaga. Shirkadaha Batroolka ujeedadoodi waa u hiirgashay oo waxey Sanadkaan, 2014, billaabeen in ay dalooliyaan Xeebta Soomaaliya si ay Batroolka uga soo saaraan 2016-ka.
Ciidamadaas Kenyaanka iyo Calooshood u Shaqeysayaal Soomaaliyeed sida Maxamed Cabdi Xaaji “Gaandi”, Morgan, Madoobe, Darwiish ayaa waxey Xasuuq ku hayaan Dadka Soomaaliyeed, Xusuuso Xasuuqi Mandheera, Xasuuso Xasuuqi Gaarisa. Kenya waxey Madaafiic iyo Diyaaraddo ku xasuuqday 4,600 (2014) oo Soomaali ah ayadoo kuwa isku sheega „Beesha Caalaamnka“ raali uga yihiin, qiilna looga dhiganayo leyntaas in Argagixiso – suurtowda in ay ayaga abuureen – lala dagaalamayo.
3. General Gabre Heard
General Gabre sida la agsoonyahay waa Janan Itoobiyaan ah, oo qabiilka Tigreega kasii ah, waa Generaalkii lasoo galay Magaalada Muqdisho taangiyadda Itoobiyaanka asagoo Caloosha ku sita Dagaal ooge Cabdullahi Yuusuf, Maanta Marxuum Eebbe ha u naxariiste.
Genrral Gabre wuxuu daganyahay Sar Villa ah oo u jirta Shan Mitir Madaxtooyadda Soomaaliya, ma jiro dhaq-dhaqaaq Siyaasadeed iyo mid Millitaro oo quseeya Soomaaliya oo uusan la socon. Soomaaliya Madax kama noqdo, Nin uusan Gabre keenin ama aan lagala tashan.
Wararka „Hoteeladda heerka Sare“ ee Magaalada Muqdisho la isla dabamarayo waxaa kamid ah in Wasiirka Cadaaladda & Dastuurka, Dr. Faarax Cabdulqadir uu kamid yahay Dadka Gabre uu soo xushay oo Dowladda Soomaaliya ku jira oo Itoobiyana Wakiilka uga ah.
Waxaa isku xiran Hay’adda Nabadsugidda & Sirdoonka Soomaaliya, Sirdoonka reer Galbeedka iyo Muqaabaraadka Itoobiya. Itoobiya waxaa gacanteeda si buuxa ugu jira Gobollada Bay & Bakool, Gobollada Dhexe & Jubbooyinka oo hada Gacanta laga saaray, horeyna waxey hanatay oo ay heysatay Somaliland & Puntland oo ayaga u kala tartamaya kii Kililka Lixaad noqon lahaa.
Taasi waa guul Itoobiya oo dhashay gunimo Soomaaliyeed!
4. Axmed Madoobe
Axmed Madoobe, wuxuu sheegta in uu Soomaali yahay, mar Wadaad diimeed ahaa Maxaakimta sheegan jiray, mar Dilaa Shabaab ah, Raas-Kambooni u xuub siibtay oo Maleeshiyo beeleed ah, hada Worlord bulshada deegaanka Jubbooyinka Argagax galiyay, kufsi, dhac, dil, barakicin, nabaad guur ku riday bay’adda oo dhirtii boqolaalka Sanno la harsan jiray dooxo banaan kasoo saaray si uu u dhuxusha u dhoofsado oo Dollar kasoo saarto.
Taariikhda Soomaaliya horey bey usoo martay kuwo Dabadhilif ah oo uu Gumeystuhu danihiisa ku fushado, diyaarad la saaro, labo habeen Hotel kadiifad Gaduudan la seexiyo, BBC-da laga sheego, xoogaa Dollar ah Jeebka loo galiyo kadibnah markii Dalkiisa lagu burburiyo, oo dantii laga lahaa laga gaaro la yiraahdo kuma naqaan oo ciida lagu jiido!
Sidoo kale waxaan Taariikhda ka baranay in Kooxi ay Gobol qabsan karto oo ay mudo Qafaalan karto, hase ahaatee in aysan marna suurtagal noqon Xukun Waara oo lagu Nagaado, badanaanah sidee ku yimaadeen bay ku Hayaamaan.
Baal Xun buu taariikhda Soomaaliya ka galay, oo lagu xasuusan doono.
5. C/wali Axmed Maxamed
Cabdiweli Axmed Maxamed billowgii 80yadii waxuu ka mid ahaa guddiga Ardeyda Jaamacadda oo hoos tagi jiray Hey’ad Cinqaabeedka NSS. C/wali wuxuu jagadaa ku helay si qabyaaladaysan, maadaama uu Maxamed Siyaad Barre adeer u ahaa.
C/wali Axmed Maxamed iyo (Cabdirasisaq Jurila, Jurila waa ninkii mashruucii FAI ee Talyaaniga ka musuqmaasuqay Lacag ka badan Labo Malaayan oo Doollar Mareykanka ah, mana jirto teer iyo hada wax kala xisaabtamay. Sidee taariikhdu sheegto, wuxuu ku lug lahaa sunta lagu aasey Gobollada Bari, dariiqa Garoowe & Boosaaso iyo guud ahaan xeebaha Soomaalaya.)
Labadaan Nin ayaa waxey Jaamacadda dhexdeeda ka diyaarsheen Liis ay ku qoron yihiin Ardayda aan ku haybta ahayn, gaar ahaan ardayda Beesha Hawiye ee Jaamacadda dhigata in gebi ahaan Jaamacadda laga eryo, gaar ahaan kuwoooda ugu firfircoon ama waxbarashada ugu fiican. C/wali Axmed Maxamed iyo Cabdirasisaq Jurile waxey raacdeynta ardadaas ugu soo gambadeen in ay ahaayeen kacaan diid kasoo horjeeda Rajiimkii Maxamed Siyaad Barre oo ay ayagu u arkaayeen Rajiimkoodi.
C/wali Axmed Maxamed isla maalintii uu Jaamacadda ka qalinjabshay ayaa madax looga dhigey mashruuci ahaa; SUUQGEYNTA XOOLAHA, isagoo saddax Milyan oo Doollar oo mashruuca loo qoondeeyey lunsadey, Cid la xisaabtantayna aysan jirin. Wuxuu laba aqal oo waaweyn ka dhistey, xaafadda BOOLI QARAN iyo xaafadda Yaaqshiid.
Markii ay Dagaaladdii Sokeeye, haraadigii rajiimkii Maxames Siyaad Barre ay doonayen in ay muqdisho ku qabsadaan ku fashilmeen ayuu Qaxootino ka codsaday dalka Kanada halkaaso loo qaaday. Ilaa Maanta wuxuu eedeesane ka yahay oo dacwad uga furanahay Dalka Kanada asagoo ku eedeysan in uu Lacagta Ceyrta ee la siin jiray is-daba marsiiyay kadibna kasoo cararay.
Cabdiweli siduu ku noqday Raisul Wasaare waa mid mugdi ku jirta, waayo asagaa wuxuu yahay Shaqsi mugdi ah, qabiili ah, dagaalladii sokeeye 1991 ka qeyb qaatay asagoo ku duulaya Isir Naceyb sloogankiisuna yahay „Hawiye nama xukumi karo“. Ayadoo Soomaali ogsoontahay dhibaataddii uu rajimkii Siyaad Barre u geestay Waqooyi & Koofurka Soomaaliya ayaa arintaas Dadkii rer Koonfureed (guud ahaan Hawiye) iska ilaaween oo laga dhigay xalay-dhalay, hase ahaate waxaan illaawin waa Cabdiweli Sheekh Axmed, markii Jagada loo magacaabay Raisul Wasaarnimada ficiladii guracnaa ee daaroodisnamada ahaa ee uu ku kacay.
Waxaa la yaab leh in la waayay Ugaas, caaqil, aqoonyahan, culumo, xeelbeege Mareexaan ah oo qabta Cabdiweli, yiraahda war ka joog Soomaali ha nagu darine, Majeerteen waa Musiibo, Mustaqbil madow ee aan Soomaali wax la qabsano. War Soomaali ha nagu dirin, hasoo faagin boog biskooneysay. Hawiye aan wax la qabsano waad aragteen see dagaaladdii Sokeeye (Daawo) noo badbaadiyeen, waad aragteen see Farmaajo u taageereene.
Marka waxaa la yaab leh in Mareexaan ay mar walba ku dhacaan dabinka uu dhigo Majeerteen. Xusuuso, Xasan Abshir Waraabe oo Shilkii uu Siyaad Barre ku naafoway galiyay oo uu sababta u ahaa. Xusuuso Cinqilaabkii Cirro. Xusuuso aasaaskii SSDF iyo dhafoor qiiqi, Xusuuso Calanka Amxaartadda xirsi magan inuu boosaaso suray, Xusuuso Cabdullaahi Yusuf (AUN) Goldogob & Balanbal ka taagay, Xusuuso riditaankii Rajiimkii Siyaad Barre. Xasuuso; Faroole in uu ku faanay, asagoo sheegayana in uu xoog badan galiyay sidii Farmaajo looga qaadi lahaa Xilka.
Waxaa la rajeynaya in la helo Waxgarad Mareexaan ah oo raali galin ka bixiyo ficiladda gurucan ee uu Jabhad Cabdiweli ku kacay.
Kooxdaan Hal ku dhigoodu waa yeysan dhalan Dowlad Soomaaliyeed oo cagaheeda ku istaagta.
Cumar Cabdirashiid, (waa Ninkii Kenya ku Saxiixay in la siiyo Badda Soomaaliyeed oo laga soo reebo 12Ml Dhul Baddedka Soomaayiya), Xasan Abshir Waraabe, Maxamed Cabdi Yuusuf Gaandi, Maxamed Cabdi Yuusuf, Jurilla, Cali Khaliif Galeyr, Gen. Morgan iyo Saddex kaloo dameeri dhaan raacday ah, sida Maxamed Cali Geedi, Dhuxullow, Cabdullahi Jaamac Kabaweyne „Cabdullahi Hargo“.
Raggaan waxaay ku Caan baxeen, waxey ku Cayileen oo ay ku taajireen Dhiiga Bulshadda Soomaaliyeed oo Tabarta yar. Kooxdaan waxaa loo yaqaan GAFANAYAAL, Gafanahu waa Bahal Qurun badan oo Dhiiga Xoolaha ku nool.
7. Madaxda Maamulka Punland:
Maamulka Bari ee Cabdiweli Gaas uu Madaxda ka yahay iyo Cabdiweli Sheekh Axmed Heshiiska ay galeen wuxuu ahaa mid bannaanka soo dhigay qabyaaladda qayaxan oo aan geed loogu soo gamban oo Soomaali oo dhan ka fajiciyay. Wuxuu ahaa mid sadbursi, eex, qabyaalad, islaamka garab marsan, Somaaliduna aysan dhaqan u laheyn, laakiin ay ayagu u bareereen.
Maamulka Cabdiweli Gaas wuxuu sheegtay, dhowrgoorna ku celceliyay waxaan nahay Dowlad madaxbannaan oo la siman Itoobiya, Jabuuti, Naageeriya, wuxuu sheegta in uu heshiisyo iskaashi Ciidan lasoo galay dowladda Itoobiya. Fiiri Maalin dhaweyd wuxuu yiri “waxan halkan (Addis Ababa) u imid xoojinta xiriirka labada DAL!“ Labadee DAL? Waa la Yaabe.
Wuxuu sheegta inay ka cudud iyo qoylo dheer yihiin soomaalida oo dhan. Wuxuu ku doodaa in uu xaq u leeyahay in ay fariistaan Miis walba oo soomaali lagu casumo. Hadaba muxuu ka dhex samaynayaa Soomaaliya? Muu banaanka ka istaago iskuna sheego inuu gooni u goostay, Qaramada Midoobayna ka codsado in ay aqoonsato. May bannaanka iska istaagto sida Somaliland?
Soomaalida boqolkiiba 87, waxey aaminsan yihiin Cabdiweli Puntland Majeerteen inay yihiin fidnada iyo jaha wareerka Soomaaliya heysta. Waxey kaloo aaminsanyihiin hadii ay ka dhex bixi lahaayeen Soomaali, in Soomaali wax badan u qabsoomi lahaayeen oo ugu horeyso Midnimada Soomaaliya.
Soomaaliyeey reer Barri waxaa ku filan oo kaliya in la yiraahda geedkaad gaartiin mirro kasoo goosta.
Sii Akhriso: Xiriirka Cabdiweli Gaas iyo Burcad Baddeeda // Al-Shabaab – ‘Monitoring Group’
Waa Calooshood u shaqeystayaal cadaw ah oo u jooga danaha dalalkoodu ay Soomaaliya ka leeyihiin.
Waxay ilaaliyaan waxa lagu yeero Madaxda Dowladda Federaalka oo Cadawga Dalka u Caleemasaaran, waxayna isku si madfaca ugu laayaan kuwa ee ku sheegaan al-Shabaab iyo bulshada rayadka ah. Waxay ku hawlgalaan oggolaanshaga madaxda Dowladda iyo tan dawladahooda, waxayna burburin ku hayaan Magaalooyin Bulshada rayid ah ee deggen yihiin.
Waxay duullaan cir iyo dhul ah ku laayaan, kuna barakiciyaan bulsho rayad ah oo miyi iyo magaalaba leh. Weerarka circa ee AMISOM ku qaaddayn magaalada Jilib, yontowy, arriile, marka, baahdheere, fafaxdhuun, bay iyo bakool waxay ku laayeen Bulsho rayid ah oo ay ku jiraan, dumar qaarkood uur leeyihiin, dhallaan iyo waayeelba.
Waa dagaal aan la ogayn guusha laga gaari doono, oo aan aheyn in Dadka rayidka ah laga barakiyiyo deegaanadaas, shiiheeyihu uga faa’ideysto Kheeyraadka dabiiciga ah ee Dalka ceegaaga.
Italy’s invasion of Ethiopia – coming to the aid of the Emperor Muqdisho oo ku Xuquuq Weysay Federal-ka